ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းကိုသွားကြမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းကိုသွားကြမယ်	9
Posted by အောင် မိုးသူ on Jan 15, 2016 in History |9comments
“ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းအလှ နှင့် ပင်လယ်ကမ်းခြေ နှစ်ခုအလှကို ခံစားနိုင်မည့် ခရီးစဉ်”
? တစ်ဦးလျှင် ၆၀,၀၀၀ ကျပ် ( ၅ ဦး နှင့် အထက်၊ ၁၀ ဦး နှင့်အထက်များ အတွက် Special Discount)
? ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ မဟာမြိင်မှတ်တိုင်မှ စတင်ထွက်ခွာ ပြီး ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့ မနက် ပြန်ရောက်ပါမည်။
လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် အမြန်ဆုံးစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီရှင်….
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်း ၀၉ – ၂၆ ၄၅ ၈၈၁၅၅, ၀၉ ၂၆၂၄၄ ၉၁၀၆, ၀၉- ၄၄၈၀၀ ၈၁၁၀ တို့ကို ဆကိသွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါ တယ်ရှင်…
? စိတ်ရင်းစေတနာ အလွန်ကောင်းသော ဒေသခံများ နေထိုင်ရာ ငရုတ်ကောင်းမြို့
? သဘာဝတရားတွေနဲ့ ဂမ္မီရဆန်ဆန် ပါးစပ်ရာဇ၀င်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သာယာလှပသော ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်း နှင့် နံသာပုရွာ ကမ်းခြေ
? လှေကားထစ်တွေများစွာ တက်ရပေမဲ့ အပေါ်ရောက်လျှင် အံ့သြဖွယ်ရာ အလှအပ ခံစားနိုင်သော ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းရှိ မြ၀တီဆုတောင်းပြည့်စေတီတော်
? လှပသော ကျောက်စွယ် ကျောက်တန်း ကျောက်မိုးများ ရှိရာ ပင်လယ် အနားသတ် အလှအပများ
? လတ်ဆတ်သော ပင်းလယ်လေကို ခံစားနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
? ပင်လယ်လုပ်သားများအား အနီးကပ် လေ့လာနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
? ရိုးရှင်းစွာလှပနေသော အပျိုစင် ငရုတ်ကောင်း ကမ်းခြေတွင် ရေကစားခွင့်
? ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေဆုံး သွားရောက်နိုင်ရန်အတွက် Air-con လေအိပ်ကား
? ထမင်းဆီဆမ်း နှင့် ဒေသထွက် ငါးခြောက်ဖုတ်၊ ပုဇွန်ကြော်များဖြင့် သုံးဆောင်နိုင်မည့် နံနက်စာ
? ပင်လယ်စာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်များ ဖြင့် ခံတွင်း မြိန်စေမည့် နေ့လည်စာ နှင့် ညစာ
? ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးသွားမည့် Tour Leader
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက အမှတ် (၅၇) ၊ ပါရမီလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်။
ဖုန်း ဖုန်း ၀၉ – ၂၆ ၄၅ ၈၈၁၅၅, ၀၉ ၂၆၂၄၄ ၉၁၀၆, ၀၉ – ၂၆ ၄၅ ၈၈၁၅၄, ၀၉- ၄၄၈၀၀ ၈၁၁၀ တို့ကို ဆကိသွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါ တယ်ရှင်..
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဟုတ်ကဲ့ပါ ရှင်
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ကဲ့ရှင့်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .သွားချင်စရာပဲ…ဈေးနှုံးလည်းသင့်တယ်
အောင် မိုးသူ says: အပြီးအငြိမ်းလေ အဲသည် တိုးလ်က ဆားဗစ်ကောင်းတယ် ဒီည ကျတော်သွားမို့လေ။ ပြန်လာမှ အသေးစိတ် ပြောပြမယ်။
alinsett says: အပျိုစင် ငရုတ်ကောင်း ကမ်းခြေနဲ့ တစ်ည အိပ်ပြီးရင်…. ပြန်လာရင်… ကိုယ်က လူပျိုရည်ပျက်သွားမှာလားငင်
အောင် မိုးသူ says: နီ ပျက်ချင်လို့လား
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခုတလော သွားမယ် လည်မယ် ကြံတိုင်း နေရာရဲ့ လုံခြုံ စိတ်ချရမှုကို လိုတာထက် ပိုစိုးရိမ်နေမိတယ်။
အောင် မိုးသူ says: Package နဲ့ သွားပေါ့အစ်မ။ စိတ်ချရပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်း တော်ဝင်နီသွန်း ပေါ်ထင်သီစွမ်း အော်ရင်မြည်လွန်း